Jpg Iweghachite - naghachi ehichapụ, furu efu jpg, PNG photos
Olee otú Naghachi Lost jpg Images
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Lost jpg Images
Naa, fọrọ nke nta ezinụlọ ọ bụla dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ a dijitalụ cemara ma ọ bụ a silimar ngwaọrụ maka ewere foto. Ọ bụ eziokwu na ị na-adịghị mkpa film ọzọ na-photos dị ka n'ihu na cemara nwere ike na-jpg ma ọ bụ JPEG photos ka gị na-azọpụta ha n'ebe ọ bụla. The nnukwu nsogbu bụ na igwefoto kaadị nwere ike mfe ịzọpụta nza nke ihe oyiyi, ma dịkwa nnọọ mfe furu efu ha site na-ezighị ezi arụmọrụ. Ihe kwesŽrŽ ime mgbe a nleta enweghị ihe ọ bụla nkwadebe? Niile ị chọrọ bụ a jpg mgbake.
Olee otú naghachi ehichapụ / furu efu jpg photos?
N'ozuzu, e nwere dị iche iche ihe na-eme ka gị jpg, JPEG foto furu efu, dị ka mberede nhichapụ, kaadị ure ma ọ bụ keerughi, ike ọdịda, nje ọrịa na ndị ọzọ. N'agbanyeghị na ị furu efu gị photos n'ihi ihe ọ bụla n'elu, Wondershare Photo Recovery, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac, nwere ike inyere gị aka ịchọta ha azụ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Ọ bụghị nanị na ihe oyiyi formats zoro n'elu, a jpg faịlụ mgbake omume na-akwado mgbake nke a dịgasị iche iche nke formats dị ka TIF, BMP, PNG, GIF, RAF, ERF, PSD, WMF, CR2, DNG, Raw, NEF, ORF na ndị ọzọ , nakwa dị ka mgbake nke music na video na ọtụtụ usoro.
Ntị: Mgbe adịkwa gị foto site na kaadị ebe nchekwa, SD kaadị, ma ọ bụ ndị ọzọ kaadị, biko anaghị eji ya na-photos ọzọ, ma ọ bụ tinye ọhụrụ foto na, nke ga ibelata ihe ịga nke ọma mgbake nke foto gị. Bụrụ na furu efu site na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ ike draịva, na ị na--adịghị kwesŽrŽ etinye ọhụrụ ọ bụla data n'ime ebe ị kwụsịrị photos.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute n'okpuru iṅomi gị furu efu photos tupu ị na-akwụ maka mgbake. Dị nnọọ na a na-agbalị! Ị nwere ike rụchaa ọrụ a na ọtụtụ nwa nzọụkwụ.
Mkpa: Unu ibudata na wụnye a JPEG / jpg faịlụ mgbake na disk ma ọ bụ nkebi ebe ị furu efu gị photos.
3 nzọụkwụ naghachi ehichapụ jpg faịlụ
Ka na-na Photo Recovey maka Windows dị ka a na-agbalị na-eme ndị jpg mgbake nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Step1. Ọ bụrụ na ị bụ banyere naghachi furu efu JPEG / jpg oyiyi si igwefoto dijitalụ, camcorder, mobile ekwentị ma ọ bụ ndị ọzọ na obere ngwaọrụ, jikọọ ya na kọmputa gị mbụ. Ọ bụrụ na, ozugbo kụrụ na "Malite" n'ihu mgbe launching usoro ihe omume.
Step2. Họrọ ngwaọrụ na pịa "iṅomi" ịchọpụta gị furu efu foto site na ya. Bụrụ na ọ bụghị ngwaọrụ, biko họrọ nkebi ebe ị furu efu gị jpg faịlụ, na-aga "iṅomi".
Step3. Mgbe iṅomi okokụre, niile recoverable faịlụ na-hụrụ, gụnyere ọdịyo faịlụ, foto na vidiyo. Iji nweta jpg photos, ị nwere ike ozugbo gaa "Photo" Atiya, chọta "jpg" na nchekwa ma ego ya "Naghachi" ha.
Ihe i kwesịrị ntị bụ: Unu ịzọpụta natara jpg faịlụ na mbụ disk ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ, n'ihi ọhụrụ faịlụ ga overwrite furu efu faịlụ. Ọ bụrụ na e ọ bụla faịlụ efu, ị ka nwere ohere nke abụọ ka iṅomi na-agbake ha.